Archive du 20170623
Pierrot Rajaonarivelo Miantso fitoniana
Nanohana ny filoha Rajaonarimampianina hatrany ny MDM (Mouvement pour la Démocratie à Madagascar) nanomboka ny fihodinana faharoan’ny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny 2013
Force de changement Hamory vahoaka anio
Nanao antso avo tamin’ny alalan’ny ireo tanora mpikambana ao aminy tetsy amin’ny foiben’ny antoko AKFM etsy Andravoahangy ho an’ny vahoaka malagasy omaly ny vovonana politika Force de changement taorian’ireo fivoriana samihafa natao hanomanana ilay fihetseham-bahoaka
Depiote Randrianarisoa Stanislas Nanampy ny Lycée St Etienne Ambanidia
Ao anatin’ny fanamarihan’ny lisea tsy miankina Md Etienne etsy Ambanidia ny faha-55 taona niorenany, 1962-2017,
Hodian’ny olona vendrana!
Manao ahoana ry Jean a ! Manao ahoana ny fiomankomanana ao e ? Inona indray izany izao ry Jean ny zavatra tsy hampoizina hiseho amin’ity fety indray mitoraka ity ?
Raharaha Free news Feno tsy fanarahan-dalàna, hoy ny mpisolovava
Nalain’ny avy eo anivon’ny biraon’ny polisy misahana ny heloka bevava am-bavany etsy Anosy omaly maraina ny talen’ny famoahan’ny gazety Free news, Haja Rasoanarivo sy ny tonian-dahatsoratr’izy ireo, Toky Ravaroson.
Afera Soanierana Ivongo Tetika hitrandrahana harena
Tetika nentina nanakorontanana ny niseho tany ny alatsinainy 19 jona lasa teo, hoy i Bertrand Martin, mpanolotsain’ny Ben’ny tanànan’i Soanierana Ivongo omaly
Vola ny fotoana, hoy ry zareo kelimaso. Nahita koa ry zareo be kintana fa mitombina izany fijery izany ary dia nilaza izy ireo fa tsy misy zava-dehibe mihoatra io fotoana io.
Hopitaly Befelatanana Zava-bita maro sosona no notokanana omaly
Zava-bita maro sosona no indray notokanan’ny fitondram-panjakana tao amin’ny hopitaly Befelatanana omaly.
Zava-bita maro sosona no indray notokanan’ny fitondram-panjakana tao amin’ny hopitaly Befelatanana omaly. Vokatry ny fiaraha-miasany tamin’ny governemanta Japoney sy ireo orinasa tsy miankina maro isan-tsokajiny no angady nananana sy vy nahitana izany ho fanatsarana ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka eto amintsika.
Faly Ramakavelo “Fahaleovantena ara-toekarena aloha”
Mahaleotena ianao rehefa mahavita manome sakafo sy mamatsy ny filana fototra ao amin’ny firenena, hoy i Faly Ramakavelo.
TONTOLO AMBANIVOHITRA Feno mpitrandraka vahiny tsy ara-dalàna
Fikambanana iray niorina tamin’ny taona 2012 ny tafo Mihaavo. Rafa faritra 17 monja no nisy azy teny am-piandohana dia efa misandraka amina faritra 22 izy ankehitriny,
Fikambanana Zanadranavalona Hanatanteraka ny taom-baovao eto Imerina
Rehefa nifanarahan’ny rehetra tonga nivory tao amin’ny tranombokim-pirenena tamin’ny taona 2016 nahitana ireo Ampanjaka isan-tsokajiny,